Sunderland oo Kulankii Tyne-Wear derby Ka Badisay Kooxda Newcastle “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Newcastle United ayaa waxaa Tyne-Wear derby garoonkeeda St James’ Park 0-1 uga badiyay kooxda Newcastle United.
Kulankan ayaa kulankii 151-aad ee Tyne-Wear derby,kaasi oo dhex mara kooxaha Newcastle United iyo Sunderland.
Ciyaaryahan Adam Johnson ayaa dhamaadkii qeybtii danbe ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Sunderland.
Kooxda Sunderland ayaa badisay kulankii afaraad oo xiriir ah ee Tyne-Wear derby.
Tababaraha kooxda Newcastle United Alan Pardew ayaa wali kulan ka tirsan Tyne-Wear derby aanan ka badin macalinka kooxda Sunderland Gus Poyet.
Kooxda Newcastle United ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta sagaalaad,waxana ay leedahay 23-dhibcood,halka kooxda Sunderland ay horyaalka uga jirto kaalinta 14-aad,iyadoo leh 19-dhibcood.
Akhriso Qodobada ay Ku Heshiiyeen Dowladda Federaalka iyo Maamulka Somaliland